सुँगुरको मुटु मान्छेमा मिल्ने
एजेन्सी, असोज ५–बेलायतका वैज्ञानिकहरुले सुँगुरको मुटु मान्छेमा प्रत्यारोपण गर्न सम्भव भएको बताएका छन्। उनीहरुले आगामी तीन वर्ष्िभत्र मान्छेको शरीरमा सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गर्न सम्भव हुने दावी गरेका गदै आएको छन्। वैज्ञानिकहरुका अनुसार यो परीक्षण पूर्व मिर्गौलाको प्रत्यारोपण गरिने छ। यदि यो परीक्षण सफल भएको खण्डमा मुटुको प्रत्यारोपण पनि सम्भव हुने बताएका छन्। विश्वभरको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने अंग प्रत्यारोपणको माग बढ्दै गएको देखिन्छ। बेलायतको मात्रै कुरा गर्ने हो भने २८० जना मुटु रोगीहरु प्रत्यारोपणको पर्खाइमा रहेका छन्।
त्यसैले यो परीक्षण सफल भएमा मेडिकल इतिहासमा ठूलो उपलब्धि हात पर्ने निश्चित छ। ४० वर्षअघि पहिलोपटक मुटु प्रत्यारोपणमा सफलता हात पारेका बेलायतका डाक्टर टेरेन्स इंग्लिसले मान्छेको शरीरमा सुँगुरको मुटु राख्ने तयारी टिपोट गरेका छन्।
डा. टेरेन्सले यसै वर्षको अन्ततिर उनका सहयोगी डाक्टरहरुले सुँगुरको मिर्गौला मान्छेको शरीरमा प्रत्यारोपण गर्ने छन्। यो प्रयोग सफल भएमा मुटु प्रत्यारोपण पनि सम्भव र सफल हुने उनको भनाइ छ। डा. टेरेन्सकाअनुसार सुँगुरको अंग मानिसमा प्रत्यारोपण गर्नुको पछाडि मान्छेको शरीर भित्रको अंग र सुँगुरको भित्री अंगहरु उस्तै हुन्छन्।
यसैले सुँगुरलाई मानिसका लागि उपयुक्त मान्न सकिन्छ। यद्यपि, यसबाट थुप्रै फाइदा मिल्नेछ। मुख्य भनेको यसबाट मान्छेलाई अकालमै मृत्यु हुनबाट बचाउन सकिनेछ। जनावरको अंग ल्याबमा उत्पादन गर्न प्रयोगहरु भइरहेको चर्चा चल्ने गरेको थियो।जनावरको अंग मान्छेमा प्रत्यारोपण गर्ने विषय विवादित बन्न सक्ने उनको भनाइ छ।
पशु अधिकारकर्मीहरुले यसको विरोध गर्न सक्नेछन्। जापान सरकारले पनि विवादास्पद एक कानून पारित गरेको छ। उक्त कानूनमा मान्छे र जनावरको हाइब्रिड अंगहरु ल्याबमा उत्पादन गर्ने प्रयास गरिनेछ। यसबाट मान्छेलाई अकालमै मृत्यु हुनबाट बचाउन सकिनेछ।